Cudurro kala duwan oo ka dilaacay Badhaadhe iyo caruur u dhimatay – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 Last updated Jan 27, 2020
Wararka ka imanaya degamada Badhaadhe ayaa sheegaya in ugu yaraan sagaal carruur ah ay u geeriyoodeen cudurro kala duwan oo kuwa faafa ah, kuwaas oo sida ay mas’uuliyiinta degaanku sheegeen ay ka mid tahay Jadeeco.
Cabdinuur Maxamed Xiirey oo ka mid ah mas’uuliyiinta caafimaadka ee degmada Badhaadhe oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in cuduradaan ay dilaaceen labadii todobaad ee ugu dambeysay.
Cabdinuur oo haatan ku sugan deegaanka Kulbiyow ee hoos taga degmada Badhaadhe ayaa sheegay in dhibka ugu weyn ee ka jira deegaanadaas uu yahay in aysan ka jirin xarumo caafimaad.
Waxaa uu sheegay in cuduradaas ay ku faafeen tuulooyin dhowr ah oo hoos taga degmada Badhaadhe, goobo caafimaad aysan ka jirin, sidoo kalena ay u qeyla dhaamiyeen Jubbaland iyo dowladda dhexe illaa hadana aysan jirid cid soo gaarsiiday gurmad caafimaad.
Dadka ay soo riteen cuduradaan oo sida uu sheegay u badan caruur ayuu sheegay in haatan lagu dabiibayo farmashiyaal yar yar oo ku yaalla degmada Badhaadhe iyo deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose.